သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း Hack ats Cheat, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
အကောင်းဆုံးသောင်းကျန်းမှုများ - သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုဤနေရာတွင် GamePron တွင်ရှာပါ။ ငါတို့မှာနံပါတ် ၁ Aimbot, Wallhack, ESP, နှင့် cheats နှင့်ပတ်သက်သည့်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အခြားအရာများရှိသည်။
သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း Hack ကို ၀ ယ်ပြီးပြီလား။ ဒီမှာနောက်ခြေလှမ်းများကိုရှာပါ
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Insurgency Sandstorm hacks များကိုမ ၀ ယ်မီသင်ဝယ်ယူရန်သင်ရှာဖွေနေသည့်ကိရိယာသည်မကြာသေးမီကနောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်အသစ်ဖြစ်နေကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေစဉ်အချို့အခြေအနေများတွင်အချိန်ဖြန့်ဝေမှုနှေးကွေးသည်။ များသောအားဖြင့်လက်ငင်းဖြစ်သော်လည်းနာရီအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည် HWID သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည် - သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းသေချာပါစေ။ product key ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ရွေးချယ် သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း hack
သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & More
ယ်ယူရန် သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း Hack in4ခြေလှမ်းများ
ဤနေရာတွင် GamePron ရှိခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်၍ သင်ရယူလိုသောဂိမ်းကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သော hack ကိုရွေးချယ်ပါ (ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာစွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ )
GamePron ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်နှင့် ၁၀၀% လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာကို အသုံးပြု၍ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ပါ
သင်ငွေပေးပြီးပါကသင်၏ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို အသုံးပြု၍ cheat များကိုသင်ရနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Gamepron သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်?
သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းသည်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံရှိသောကစားသမားများကိုသာဆုချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလက်တွေ့ကျစစ်ရေးပစ်ခတ်သူဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများသည်မသက်ဆိုင်တော့ဟုမဆိုလိုပါ။ ငါတို့အလုပ်လုပ်သောကိရိယာများသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ GamePron အသုံးပြုသူများ၏မြင့်မားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အဆက်မပြတ် update လုပ်နေပါသည်။ အခြား hack developer များကသူတို့၏ tools များကို update လုပ်ရန်နှောင့်နှေးကြလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမ ၀ င်စေရန်အတွက်သိသာသော update တစ်ခုဖြစ်သည်။ GamePron မှာလည်းအဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်လူများသည်သူတို့၏သောင်းကျန်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားကိုးသောကြောင့် Sandstorm Hack လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်သည်အနာဂတ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်မည့်ကိရိယာများကိုပေးသည်ကိုသူတို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ” လို့ယူဆနိုင်တဲ့ကိရိယာတခုကိုရယူသုံးစွဲခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးတယ်။ ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာကမ်းလှမ်းသော tool တစ်ခုကျန်ရှိနေပါကအသုံးပြုသူများသည်သူတို့လိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ လှည့်စားခြင်း၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းမှာကစားခြင်းတွင်သင်ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှာ Insurgency: Sandstorm ကဲ့သို့သောဂိမ်းမျိုးတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလက်ဖြင့်ညှိနှိုင်းခြင်းရှိခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်အားရဖွယ်ကောင်းမည်မဟုတ်သော်လည်းကျေးဇူးတင်စရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏သောင်းကျန်းမှု - Sandstorm Zero Hack ကိုဖွင့ ်၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၌အကောင်းဆုံးကစားသမားများနှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေရှိရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းရည်များမလုံလောက်သော်လည်းသင်နှင့်ကြီးမြတ်မှုကြားတွင်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏သောင်းကျန်းမှုဖြစ်သော Sandstorm Zero Cheat ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာအားလုံးတွင်တွေ့ရသောလုံခြုံရေးကိုမကြာခဏသတိမထားမိကြသော်လည်းသူတို့၏ hacking နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားသူများသည်၎င်းသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသိကြသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတားမြစ်ချက်များ၏ဖိအားကိုမခံစားရဘဲလိမ်နိုင်သည့်အခါသင်သည်သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံမှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိလိမ့်မည်။ သင်ကလက်စားချေရန်အတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာကိုအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ အလိုအလျောက် cheat ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သောင်းကျန်းမှု - Sandstorm Zero Hack ကိုမည်သည့်အခါကမျှရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အလိုရှိသည်ကို hack နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရိုးရှင်းသောအရာများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်းအရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာအသုံးပြုသူများအသစ်သည်နေ့စဉ် cheat များကိုလေ့လာနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းအရင်က hack တာကိုတစ်ခါမှမတပ်ဖူးဘူး၊ မဝယ်ဖူးဘူးဆိုရင်၊ ၎င်းသည်သင်နှင့်အတူအကူအညီတောင်းခံရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် GamePron ၌စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်းကစားသမားသတင်းအချက်အလက် ESP (အမည်၊ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်၊ အကွာအဝေး)
စစ်ထုတ်မှုနှင့်သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း item ESP
သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်းစူပါခုန် mode (activated သည့်အခါအဘယ်သူမျှမကျဆုံးပျက်စီးမှု) ။
သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်းအရိုး & key ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။
သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း Recoil လျော်ကြေး
အကောင်းဆုံး သောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်းကစားသမား ESP
Player ESP သည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ရန်သူနှင့်အသင်းဖော်များ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ Player ESP ဖြင့်ကြည့်ပါ။
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်းကစားသမားအချက်အလက် ESP (အမည်၊ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်၊ အကွာအဝေး)
ကစားသမားအချက်အလက် ESP သည်မြေပုံပေါ်ရှိရန်သူများနှင့်အသင်းဖော်များနှင့်ပတ်သက်သောအမည်၊ ကျန်းမာရေးဘားနှင့်အကွာအဝေးကိုပင်တွက်ချက်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သောင်းကျန်းမှု - Sandstorm Item ESP filter များပါ ၀ င်သည်
item ESP ကို ​​filter များပါ ၀ င်ပြီးဒီဂိမ်းထဲမှာအသုံးအ ၀ င်ဆုံးပစ္စည်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Aimbot
သင်၏ကျည်ဆန်များလက်ခံရရှိသည့်အဆုံး၌မည်သူရှိနေသည်ဖြစ်စေသင်၏တိုက်ပွဲများအားလုံးအနိုင်ရရန်အတွက် Insurgency: Sandstorm Aimbot ကိုသုံးပါ။
သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းကျည်ဆံလမ်းကြောင်း (အကွာအဝေးနှင့်အလယ်အလတ်ထိရောက်မှု)
Bullet Track ကိုတိုတိုနှင့်အလယ်အလတ်တိုက်ပွဲနှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးသင်၏ကျည်ဆန်များမည်သည့်နေရာ၌သက်ရောက်သည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။
သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းရန်သူသတိပေးသတိပေးချက်
ရန်သူသတိပေးချက်သည်အသုံးပြုသူအားသင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းစကားကိုသတိပေးမည့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်လာတော့မယ့်အချိန် (ရန်သူများကသင့်ကိုအနီးကပ်သို့မဟုတ်သင့်ကိုရည်ရွယ်နေသည်) ပေါ်လာလိမ့်မည်။
သောင်းကျန်းမှု - Sandstorm စူပါခုန်ခြင်း (သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိလျှင်ပျက်စီးခြင်းမရှိ)
Super Jump Mode သည်အရာရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်ရှာဖွေနေသူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းသည်ဤအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ မရတော့ပါ။
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်းအရိုး & အဓိကသော့ချက်ကိုအဓိကထား
သင့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ငါတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထားချင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ရတာဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူး! Aimbot သည်၎င်း၏မီးကိုမည်သို့အာရုံစိုက်မည်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းမြင်နိုင်သောစစ်ဆေးမှုများကိုလုပ်သည်
Visible Check သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Aimbot ကိုနံရံများမှတစ်ဆင့်ရန်သူများကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီးအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ hack ကို activate လုပ်စဉ်တွင်သင့်အားပိုမိုသဘာဝခံစားချက်များကိုပေးစွမ်းသည်။
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Recoil လျော်ကြေး
Recoil သည်ဂိမ်းမှအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သောသိသာသောအနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမှာကကျွန်ုပ်တို့၏ Recoil Compensator ကိုဖွင့်ထားသည်။
အကောင်းဆုံးသောင်းကျန်းသူဖြစ်ခြင်း - သင်ဖြစ်နိုင်သောသဲသောင်ပြင်ကစားသမားကို GamePron တွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သူတို့၏ဘ ၀ များစွာကိုဂိမ်းကိုကျွမ်းကျင်ရန်ကြိုးစားနေကြစဉ်သင်တို့၏ရိုးရှင်းသောကစားနည်းများကိုဖွင့ ်၍ ၎င်းတို့ကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်အနိုင်ယူနိုင်သည်။ သင်ရှာဖွေနေသည်မည်မျှပင်ကူညီပေးပါစေကျွန်ုပ်တို့၏ Insurgency: Sandstorm Hack ကို အသုံးပြု၍ သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ GamePron မှာတကယ်ရှိတယ်။
လူကြိုက်များသောသောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Hack နှင့် cheat
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း ESP နှင့် Wallhack
အခြားသောင်းကျန်းမှုများ - သဲမုန်တိုင်း Hack နှင့် Cheat များ
လူကြိုက်အများဆုံးသောင်းကျန်းမှု - Sandstorm Zero Hack နှင့် Cheats ကို GamePron တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများကိုအချိန်အတော်ကြာယုံကြည်စိတ်ချရသော cheat များပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလတ်တလောနည်းနည်းပါးပါးသောလိမ်လည်မှုများကိုကမ်းလှမ်းသည့်ခေတ်တစ်ခါမျှမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းကို hacks များကို # 1 ပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သောင်းကျန်းမှု - Sandstorm သည်ကုမ္ပဏီအချို့အတွက် tool တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးရန်ခိုင်လုံသည့်ကစားသမားအခြေခံမရှိသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မခံစားရပါ။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောသောင်းကျန်းမှုများအကြီးအကျယ်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်။ သဲမုန်တိုင်း Cheat များထွက်ပေါ်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ထုပ်ကိုပေါင်းစပ်။ သာပစ်လိုက်ခြင်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုခံစားမိသည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Insurgency - Sandstorm Zero Hack တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပြီးမြောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ GamePron သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ မင်းကိုစိတ်ပျက်စေမယ့်အခြားထောက်ပံ့သူတစ်ယောက်နဲ့ဘာကြောင့်အလုပ်တွဲလုပ်ရတာလဲ။
Aimbots များသည်၎င်းတို့တည်ရှိပြီးကတည်းကရိုက်ကူးရန်အတွက် cheat များထဲတွင်အရေးကြီးဆုံးသောကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းများမှာရှင်းနေပါသည်။ သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းတိုက်နေချိန်တွင်ရန်သူကိုသင်တွေ့ရသောအခါတိုင်းထိုတိုက်ပွဲများသည်တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ သရုပ်မှန်အဆင့်သည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားလိုလျှင်ကော။ ကျွန်ုပ်တို့၏သောင်းကျန်းမှု - Sandstorm Zero Aimbot သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များရှိပြီးသင်အမြဲတမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အတွေ့အကြုံကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ aimbot ပစ်မှတ်ထားသောadjustရိယာကိုမည်သည့်အခါကမျှပြုပြင်ပြောင်းလဲ။ မရနိုင်သောအချိန်များသို့မဟုတ်၎င်းသည်မည်မျှချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်သည်ဖြစ်စေ - ကျေးဇူးတင်စရာမှာ၊ GamePron တွင်ဤကဲ့သို့သောကိစ္စမဟုတ်ပါ။
သင်၏ FOV စက်ဝိုင်း၏အရွယ်အစားကိုသင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီးပိုမိုကြီးမားသောautomaticallyရိယာကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါကမသာပေမယ့်သင်ကသင်အမြန်ထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ကိုပေးခြင်း, အလိုတော်မှာ on / off aimbot ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်!
ESP နှင့် Wallhacks တို့သည်ဂိမ်းများကိုရိုက်ကူးခြင်းအတွက်သင်တွေ့မြင်ရလေ့ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရန်သူကိုသူတို့တွေ့ခွင့်မရခင်ခင်ဗျားကိုတွေ့တဲ့အခါအနိုင်ရဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ လက်တုံ့ပြန်မှုကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့ကိုသင်ရိုက်ကူးနိုင်ရုံသာမက၎င်းသည်ထောင်ချောက်များနှင့်ကင်းတပ်များကိုထူထောင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ သင်၏အသင်းဖော်များနှင့်အတူအဆင်ပြေချောမွေ့စွာယှဉ်ပြိုင်ရန်ပွဲအားဖြတ်သန်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သောင်းကျန်းမှုဖြစ်သော Sandstorm Zero ESP နှင့် Wallhack တို့၏ရိုးရှင်းပါသည်။ Player Info ESP ကို ​​အသုံးပြု၍ ကျန်းမာရေးအရက်ဆိုင်နှင့်အကွာအဝေးနှစ်ခုလုံးကိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့်သင်နှင့်အနီးကပ်နေသောအားနည်းနေသောရန်သူများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Wallhacks သည်အန္တရာယ်ရှိသောareaရိယာသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရန်သူစုစုပေါင်းမည်မျှရှိသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောကိရိယာများနှင့်အခြားသေစေလောက်သောပစ္စည်းများကို Item ESP (filters နှင့်) သုံး၍ လည်းဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
Footprint သည်အလွန်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် GamePron တွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ သငျသညျရိုင်းဂိမ်းအမဲကဲ့သို့အမှုအရာချဉ်းကပ်နိုင်လျှင်ဂိမ်းဘယ်လောက်လွယ်ကူလိမ့်မယ်စဉ်းစားဖူးသလား သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ခြေရာကိုခြေရာခံခြင်းသည်အသုံးပြုသူအများစုအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုသင်သည် Footprint အင်္ဂါရပ်ဖြင့်အတိအကျပြုလုပ်သည်! ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် High Damage နှင့် Distance hacks များနှင့်အတူတကွလက်ချင်းတွဲအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအဝေးထိန်းစနစ်နှင့်နံပါတ်ကိုမှတ်သားထားခြင်းအားဖြင့်ပစ်မှတ်သည်မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုသင်သိနိုင်သည်။ သင်ပစ်မှတ်ကိုချဉ်းကပ်ပြီးပိုမိုနီးကပ်စွာခိုးကြသောအခါ, သင်အချိန်လာသောအခါသူတို့ကိုထုတ်ယူသွားမယ့်သေချာစေရန် High Damage ကို enable လုပ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များကိုသေခြင်းနှင့်တွေ့ရန်သာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ရန်ထိုအချိန်ကာလအားလုံးကုန်ဆုံးခြင်းသည်စိတ်ရှုပ်စရာသာမကအချိန်များစွာဖြုန်းတီးစေသည်။
ထိထိရောက်ရောက်မုဆိုးဖြစ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်း Cheats သို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်အလိုအလျောက်သင့်ပြိုင်ဘက်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်ဤကိရိယာတွင်ထည့်သွင်းရန်သင်မျှော်လင့်လိုသောထပ်ဆင့်အင်္ဂါရပ်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ GamePron အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်သော့ချက်များမှအကျိုးအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေပါသည်။ အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များထဲမှပါ
သင်ရှာဖွေနေသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်တွင်မတင်ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုချက်များကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်အခြားနေရာများတွင်မတွေ့ရသောအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပြီးသားဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖယ်ရှားခြင်းများသည်အများအားဖြင့်တွေ့ရှိရသောအရာမဟုတ်ပါ။ သောင်းကျန်းမှုများကစားနေစဉ်သငျသညျမကောင်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏သေနတ်များအားလုံးမှယိမ်းယိုင်နိုင်သည်။ သဲမုန်တိုင်း၊ သင်လိုအပ်သမျှသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ cheats များပင်။ Visible Check သည်သင့်အားနံရံနောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေသောရန်သူများကိုပစ်ခတ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်တားဆီးပေးလိမ့်မည်။ ဒီ hack ကသင့်ကိုသာမန်ကစားသမားတစ် ဦး နှင့်တူအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Hack မေးခွန်းလွှာ
သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Hack, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & ပိုမို
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Hack
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဟုအဘယ်ကြောင့်ယူမှတ်ရကြောင်းသင့်ကိုယ်သင်မေးပါကသင်အရင်က GamePron နှင့်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ မိမိတို့၏ကိရိယာများကိုမိမိဘာသာကြိုးစားသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ဤမျှမြင့်မားသောဂုဏ်ပုဒ်ကိုဟက်ကာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။ ရလဒ်များကိုသင်လိုချင်လျှင်အခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်သောကုမ္ပဏီဟုလူသိများခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ အရည်အသွေးကိုပိုနှစ်သက်သောဂုဏ်သတင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Aimbot
Aimbots များသည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအတွေ့အကြုံကိုပျော်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်မည်သူနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသည်ကိုပင်သူပုန်များအဖြစ်သောင်းကျန်းနေနိုင်သည်။ သောင်းကျန်းသူ - သဲမုန်တိုင်းသုည Aimbot သည်အကောင်းဆုံးမဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပစ်မှတ်ထားရန်သင် aimbot ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားလိုသည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း ESP
ESP သည် Extra Sensory Perception ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းမှာသင် ထပ်မံ၍ ခံစားခွင့်မရနိုင်သောနောက်ထပ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျများသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုများသောအားဖြင့်5မှီဝဲပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tools တွေကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်တို့ကို6အသိပေးသည် ရန်သူများကိုသူတို့၏အရိုးစုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နံရံများနှင့်အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်များမှတစ်ဆင့်ရန်သူများကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်၏အသင်းဖော်များမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသိရှိရန်၎င်းသည်ငွေပေးချေသည့်အချိန်များပင်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Wallhack
Wallhacks များသည် ESP ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်များစွာဆင်တူသည်။ သူတို့အသုံး ၀ င်သော (သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသော!) ပစ္စည်းများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ ရန်သူများနှင့်အသင်းဖော်များရှာဖွေခြင်းကိုအာရုံစိုက်လေ့မှလွဲလျှင်။ သင်တို့၏သောင်းကျန်းမှုဖြစ်သော Sandstorm Zero Wallhack ကိုအသုံးပြုသောအခါရန်သူနေရာများကိုသင်အမြဲသတိပြုမိနိုင်ပြီး၎င်းသည်ရေရှည်တွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။ သင်၏ရန်သူ၏တည်နေရာကိုသိခြင်းအားဖြင့်စမတ်ပြဇာတ်များကိုအစီအစဉ်တလျှောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အနိုင်ရပွဲများပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Norecoil
Recoil သည်သေးငယ်သောပိုးမွှားဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင့်ကိုအမှန်တကယ်သတ်ပစ်မည့်အခြားအချိန်များလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Insurgency: Sandstorm Zero Hack တွင်တွေ့ရသည့် NoRecoil function ကို activation ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။ သင်အသုံးပြုမည့်မည်သည့်လက်နက်ကိုအသုံးပြုမည်ကိုအရေးမကြီးပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရွယ်အစားနှင့်ကျည်ဆံအမျိုးအစားမည်မျှရှိသည်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် aimbot ကို enable လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အကောင်းဆုံးသောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
သောင်းကျန်းမှုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း - သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်ပြီး GamePron တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ချင်သောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် product key service ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ product key ကိုသင်ဝယ်ယူပြီးလျှင်၎င်း tool ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤနေရာမှ“ Download” ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်၏သောင်းကျန်းမှုများ - သဲမုန်တိုင်းသည်အခြားသူများထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်
ကျွန်တော်တို့ဟာ“ ပရီမီယံဟက်ကာ ၀ န်ဆောင်မှု” လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းစျေးနှုန်းကို GamePron မှာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးနေသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ပိုမိုစျေးသက်သာပြီးအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်သူပုန်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သောင်းကျန်းသူများဖြစ်သော Sandstorm Zero Cheat တွင်မည်သည့်စွမ်းအင်ကိုမျှဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများသည် ၁၀၀% လုံခြုံစိတ်ချရသောကြောင့်သင်၏လိမ်လည်လှည့်စားမှုများတစ်လျှောက်လုံးသင်၏အကောင့်ကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်မည်မျှကြာကြာ (သို့မဟုတ်တိုတောင်းမည်) ကိုသင်ခိုးချဖို့ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်အချိန်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ပြိုင်ပွဲတနင်္ဂနွေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ cheat များကိုရယူပါ၊ သို့မဟုတ်ရှည်လျားသောခရီးကိုကျူးလွန်ပြီးမာစတာဟက်ကာဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ GamePron အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် ၁ ရက်၊ ၁ ပတ်နှင့် ၁ လထုတ်ကုန်သော့ချက်ရွေးစရာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဖြစ်လိုသည့်အရာများကိုမည်မျှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ငါတို့ရွေးချယ် သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်း hack
Awesome ကို သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်း ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ